Orinasa Pro-GSI Toamasina: mihena ny halatra ao amin’ny Jirama | NewsMada
Orinasa Pro-GSI Toamasina: mihena ny halatra ao amin’ny Jirama
Hentitra ny fanaraha-maso ao amin’ny Jirama eto Toamasina, hatramin’ny nanankinana izany tamin’ny orinasam-piambenana tsy miankina, Pro-GSI. Sarotiny amin’ny fanarahana ny fitsipiky ny asa koa izy ho an’ny mpiasa ao aminy.
Nandray fepetra ny orinasa Jirama eto Toamasina, hanankina ny fiambenana ny orinasa amin’ny orinasa tsy miankina. Antony, maro loatra ny halatra fitaovana, na kojakoja na akora (solika) niseho tany aloha, nefa lafo vidy, tsy maintsy atao hentitra ny fiarovana azy ireny. Miantoka izany fiambenana ny Jirama izany ny orinasa tsy miankina Pro-GSI. Nambaran- dRakotoninahy Josephat, tompon’andraikitra ao aminy, fa nihena mba tsy hilazana hoe tsy nisy intsony ny entana, na fitaovana very (ny kaontera, ny tariby, ny solika,…) hatramin’ny nitantanan’ny talem-paritra, ankehitriny, i Toto Jean Claude. Hentitra ny fisavana, isaky ny miditra, na mivoaka ny Jirama, tsy misy intsony ireo mpanararaotra ho an’ny mpiasa ato anatiny, na ny avy any ivelany.
Miara-miasa amin’ny mpitandro filaminana
Efa 10 taona niasana ny orinasam-piambenana Pro-GSI. Nilaza Rakotoninahy Josephat, fa “maro ny iantohan’izy ireo ny fiambenana, toy ny orinasa, na mpandraharaha, ny fiangonana, trano, na tanàn’olon-tsotra, sns. Manampy ireo, miara-miasa amin’ny mpitandro filaminana ihany koa izy ireo, fifanampiana amin’ny fitandroana ny filaminana.”
Mikasika ilay mpiasa iray noroahina, niteraka resabe teto Toamasina, nohazavainy fa niasa niantoka ny fiambenana tao amin’ny tokantranona pasitera iray ity lehilahy ity. Ny alin’ny asabotsy 6 oktobra, nakatony ny vavahady ary lasa namonjy alim-pandihizana izy. Nitondra vehivavy natory tao amin’ny tranoheva fiambenana. Mbola ilay pasitera no namoha azy, ny ampitso, tamin’ny 10 ora maraina. Voatery noroahina izy, satria hadisoana goavana eo amin’ny fepetran’ny asa izany. “Sarotiny amin’ny fitsipika mifehy, ity orinasa ity”, hoy ihany izy.